ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်- ကိုဗစ်ရှိမရှိ ဥရောပခရီးသွားတွေကို စစ်ဆေးမှုကြောင့် အမေရိကန်လေဆိပ်တွေ ဖရိုဖရဲဖြစ်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်- ကိုဗစ်ရှိမရှိ ဥရောပခရီးသွားတွ...
15 มี.ค. 2563 - 15:19 น.
စစ်ဆေးခံဖို့ နာရီနဲ့ချီစောင့်ရတဲ့အတွက် လူတန်းရှည်ကြီးတွေ ဖြစ်နေ
အမေရိကန်လေဆိပ်တွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကင်းစင်မှုရှိမရှိ စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးမှုတွေကြောင့် ခရီးသည်တွေနဲ့ ပြည့်ကြပ်ပြီး ဖရိုဖရဲအခြေအနေ ဖြစ်နေပါပြီ။
အဓိကက ဥရောပကနေ ပြန်လာသူတွေကို စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အကောက်ခွန်ဌာနကို မဖြတ်သန်းခင် စစ်ဆေးမှု ခံယူဖို့အတွက် ခရီးသွားလူတန်းရှည်ကြီးဟာ နာရီနဲ့ချီပြီး တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေရပါတယ်။
အစောပိုင်းတုန်းက အမေရိကန်ဒုသမ္မတ မိုက်ပင့်စ်က ဥရောပကို ခရီးသွားထားတဲ့သူတွေကို ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်မယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပြီး အခုတော့ အဲဒီလို ပိတ်မယ့်အထဲ ဗြိတိန်နဲ့ အိုင်ယာလန်တို့ကိုပါ ထပ်တိုးထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ မတ်လ ၁၅ ရက်ထိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူပေါင်း ၂,၇၀၀ ကျော်နဲ့ သေဆုံးသူ ၅၄ ဦး ရှိနေပါတယ်။
ခုလိုလုပ်တာက လူတွေ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုကူးနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုပြီး ထရမ့်ကို အပြစ်တင်နေကြ
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးJB Pritzker က ချီကာဂိုမြို့က အိုဟာရီးလ်လေဆိပ်မှာ ခုလို လူတန်းရှည်ကြီး တန်းစီးနေရတာ လက်မခံနိုင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပြီး သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့ ချက်ချင်းဖြေရှင်းပေးဖို့ သူ့ရဲ့ တွစ်တာအကောင့်မှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။
လေဆိပ်မှာရောက်နေတဲ့ ခရီးသည်တွေထဲကတချို့ကလည်း လေဆိပ်ထဲမှာ လူတွေ စုပြုံနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကို တွစ်တာမှာ တင်လာခဲ့ကြ ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်
ဥရောပ၂၆နိုင်ငံက ခရီးသည်တွေကို အမေရိကန် စတင်ပိတ်ပင်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ၊ ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ
လေဆိပ်မှာ လူထောင်ပေါင်းများစွာဟာ ကိုရိုနာကင်းစင်ကြောင်း စစ်ဆေးခံဖို့ နာရီနဲ့ချီပြီးစောင့်နေရတာက ကောင်းတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ ထရမ့်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ ကူးစက်ကုန်အောင်လို့ အခြေအနေကို ဖန်တီးနေတယ်လို့ ခရီးသည်တစ်ဦးက သူ့ တွစ်တာမှာ ရေးထားပါတယ်။
ခရီးသည်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာနောက်ခံရာဇင်ဝင်တွေကို မေးမြန်းခံရသလို ရာဂါလက္ခဏာတွေရှိမရှိလည်း စစ်ဆေးခံရပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမိမြေလုံခြုံရေးဌာနအကြီးအကဲ Chad Wolf ကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိ စစ်ဆေးမှုအတွက် အချိန်ကြာနေတာတွေကနေ တိုးတက်လာဖို့ လေကြောင်းလိုင်းတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတချို့ကတော့ အခုလို လေဆိပ်တွေမှာ လူတွေအစုအပြုံလိုက်စောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့အခြေအနေက ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရဖို့ ပိုပြီး အလားအလာများတယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်- ကိုဗစ်ရှိမရှိ ဥရောပခရီးသွားတွေကို စစ်ဆေးမှုကြောင့် အမေရိကန်လေဆိပ်တွေ ဖရိုဖရဲဖြစ်